पुजा शर्माको ‘पोइ पर्‍यो काले’, आकाश र सौगातमा कस्ले मार्ला बाजी ? हेर्नुस (ट्रेलर सहित) - www.dthreeonline.com
प्रकाशित मिति: बिहिबार, आश्विन १६, २०७६ समय: १७:३१:३९
ईटहरी/ आउँदो कात्तिक ८ गतेबाट देशैभर प्रदर्शनमा आउन लागेको अभिनेत्री पूजा शर्मा र अभिनेता सौगात मल्ल स्टारर चलचित्र ‘पोइ पर्‍यो काले’ को ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । दशैंको शुभकामनासहित बुधबार सार्वजनिक गरिएको ट्रेलर रमाइलो बनेको छ । कमेडी र कन्फ्यूजनले ट्रेलरले कालो वर्णको एक युवकको जीवनमा आउने उचार-चढावमा फिल्म केन्द्रित रहेको बोल्छ । हेर्नुस ट्रेलर
ट्रेलरमार्फत् चलचित्रका कलाकारहरुको चरित्र चित्रण गरिएको छ । चलचित्रमा अभिनेत्री पूजाको नाम पूजा शर्मा नै छ । उनलाई आफू निकै राम्री रहेको घमण्ड छ । काले वर्णको युवक पिटिक्कै मनपराउँदिनन् । सौगातले भने कालो वर्णको एक युवकको भूमिकामा निभाएका छन् । उनी पूजालाई मनपराउँछन् । अभिनेता आकाश श्रेष्ठलाई नयाँ-नयाँ युवतीसँग रोमान्स गर्ने पात्रको रुपमा चित्रण गरिएको छ ।
अभिनेत्री श्रृष्टि श्रेष्ठले पूजाको साथीको भूमिका निभाएकी छन् । उनलाई आकाशले मनपराउँछन् । तर, ट्रेलरको अन्तिम दृश्यले चलचित्रमा को कसको जोडी ? भन्ने कन्फ्यूज बनाउँछ । यो चलचित्रमा सोहित मानन्धर, राजाराम पौडेल, सुरक्षा पन्त, शिशिर राणा, किरण नेपाली, श्रृष्टि खड्कालगायतका कलाकारहरुको पनि अभिनय छ । शिव ढकालले चलचित्र खिचेका हुन् भने कमल राई र रामजी लामिछानेको कोरियोग्राफी छ ।
किरण नेपाली प्रस्तुतकर्ता रहेको चलचित्रमा राजिव गुरुङ र सरोज नेपालीको लगानी छ । अमलादेवी राई चलचित्रकी कार्यकारी निर्माता हुन् । चलचित्रका लेखक तथा निर्देशक शिशिर राणा हुन् । उनले यसअघि चलचित्र ‘तिमीसँग’ को क्याप्टेनसिप सम्हालेका थिए । तारा थापा ‘किम्भे’ को सम्पादन रहेको चलचित्रमा लालबहादुर खाती र अर्जुन पोखरेलको संगीत छ । चलचित्रको यसअघि शिर्ष गीत सार्वजनिक भइसकेको छ ।